Waa maxay dhacdooyinka cimilada ee daran? | Saadaasha Shabakadda
ka dhacdooyinka cimilada daran Iyagu waa kuwa, xooggooda awgood, u geysta waxyeello weyn iyo xitaa dhimasho. Kuwa dhifka ah ama aan ku habooneyn xilliga aan ku jirno sidoo kale waa lagu soo daray. Diirimaadka adduunka dartiis, aad iyo aad ayaa looga hadal hayaa, maadaama ay aad iyo aad u sii adkaan doonaan, sida ka muuqata a waxbarashada lagu daabacay The Guardian.
Laakiin maxay dhab ahaan yihiin?
1 Cadaadiska kuleylka
2 Duufaannada kuleylaha
3 Hirar qabow
4 Mawjadaha kuleylka
Xadka ugu sarreeya ee buufiska kuleylka ee bini'aadamku iska caabin karo waa koror celcelis ah 7ºC. Qiimahaani wuu ka sareyn karaa ama ka hooseyn karaa iyadoo kuxiran xaaladaha deegaan ee ay ku noolaayeen sidaa darteedna, qof walba wuxuu caadaystay. Tusaale ahaan, haddii aad waligaa ku nooshahay aag heerkulkiisu had iyo jeer ka sarreeyo 24ºC, waxay u badan tahay in haddii ay kor u kacdo 31ºC aad go'aansato inaad baxdo. Sidoo kale, waxaa jira gobollo badan oo laga tagi karo oo aan la dagi karin.
Duufaannada kulaylaha, oo sidoo kale loo yaqaanno duufaanno, duufaanno ama duufaanno kulul, ayaa lagu gartaa inay leeyihiin aag cadaadiskiisu aad u hooseeyo, oo leh dabayl duufaan ah ugu yaraan 120km / saacaddii. Iyagu waa kuwa ugu waxyeellada badan, oo heer kulka sii kordhaya, waxay noqonayaan kuwo qatar badan. Tusaale waxaa u ah Hurricane Patricia, oo Oktoobar 23, 2015 noqotay nooc 5 ah, oo leh dabeylo gaaraya 356km / saacaddii.
Waxay ku sifoobeen a hoos u dhac degdeg ah oo heerkulka ah oo ay keeneen duulaanka hawo qabow, taas oo ay abuurtay hawada hawada. Waxay u dhexeeyaan dhowr boqol ilaa kumanaan kiilomitir oo laba jibbaaran. Cawaaqib xumadeeda sidoo kale waxay noqon kartaa mid waxyeello weyn geysata: luminta nolosha (dadka iyo duunyada kaleba), waxyeelo weyn oo soo gaadha dalagyada, sidoo kale waxay sababi kartaa waxyeello soo gaadha tuubooyinka haddii aan si habboon loo daboolin.
Mawjadaha kuleylka ee Yurub 2003
Mawjadaha kuleylka waa xilliyo inta lagu jiro heerkulku wuu ka sarreeyaa sidii caadiga ahayd muddo dheer aag ka ballaadhan ama ka yar. Cawaaqib xumada ka dhalan karta dhacdooyinkan saadaasha hawadu waa kuwo fara badan oo kala duwan, iyaga ka mid ah waxaan iftiimineynaa: luminta dalagga abaarta daran, hoos u dhaca xoolaha iyo astaamaha sida guud ahaan bina-aadamka.
Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran waa dhibaato aad u daran oo u horseedi karta waxyeelo weyn dadweynaha. Si looga fogaado iyaga, way ku habboon tahay in fiiro gaar ah loo yeesho digniinta cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay dhacdooyinka cimilada ee daran?
Daabacaad wanaagsan oo diyaar ah intaas oo dhanna ma dhihi karo wax intaa ka badan maxaa yeelay kama fikiri karo wax kale: v
Ku jawaab pablo gamon